Ma rumaysantahay in 11 milyan oo qof u dhintaan sannadkasta cuntada maalinlaha ah ee aynu quudanno? | Berberanews.com
Home CAAFIMAAD Ma rumaysantahay in 11 milyan oo qof u dhintaan sannadkasta cuntada maalinlaha...
Daraasad saamayn leh oo muujinaysa cunnooyinka aynu maalinlaha u quudano oo sanadkasta ay u dhintaan 11 milyan oo qof
Cilmi-baadhis ay samaysay Lancet, waxay ku ogaatay in cuntadeena maalinlaha ah inay tahay dilaa ka weyn sigaarcabka waxayna hadda ku lug leedahay shantii geeridood ee aduunka ka dhaca inuu hal qof u dhinto dunida oo dhan.
Milixda – haddii ay ku jirto roodhi, ​​suugo ama cuntooyin la kariyo – waxay yareeyeen tirada ugu badan ee nolosha daadama.
Cilmi baadhayaashu waxay yidhaaheenn daraasadani ma aha mid ku saabsan cayilka, laakiin “tayada liidata”ee dietka ayaa waxyeeleeya wadnaha iyo inay keento kansarka.
Xarunta Daraasaadka Caalamiga ah ee Daawaynta Cudurrada oo ah kuwo la aaminsanyahay ayaa muujinaysa sida ay dalalki ug kala sarreeyaan dhimashada ay keento cunnooyinka ay quutaan.
Falanqayntoodii ugu dambaysay ayaa lagu sheegay dhaqannada cunnooyinka ee waddammadu in ay hoos u dhigaan sida ay cuntooyinka had iyo jeer la isticmaalaa u yareeyaan noloshooda
Cuntada khatarta ku ah nolosha iyo tirada dhimashada:
Cusbo badan – saddex milyan oo dhimasho ah
isticmaal yaraanta midhaha dabiiciga – saddex milyan oo dhimasho ah
khudrad yaraan – laba milyan oo dhimasho
Heerarka hooseeya ee lowska, miraha, khudradda, omega-3 iyo fiberka ayaa ah dilaa kale.
Waxaan ogaanay in cuntada ay tahay mid ka mid awooda ugu badan ee caafimaadka adduunka oo dhan, waa wax aad u qoto dheer, “Prof Christopher Murray, agaasimaha Machadka Caafimaadka Metrics iyo Qiimeynta Jaamacadda Washington ayaa u sheegay BBC.
Sidee bay u dishaa dadka?
Qiyaastii 10 milyan oo ka mid ah 11 milyan oo dhimasho ah oo la xidhiidha cuntada ayaa sabab u ah cudurrada wadnaha iyo sharraxaya sababta cusbadu u tahay dhibaato.
Cusbada badani waxay sare u qaadaan cadaadiska dhiigga, taasina waxay kordhisaa khatarta wadno xanuunka iyo faalig.
milixdu waxay sidoo kale saameyn toos ah ku yeelan karaa wadnaha iyo xididdada dhiigga, taasoo keenta wadnaha oo aan shaqeynin marka xubintu aanay si fiican u shaqayn.
Midhaha iyo qudaarta ayaa leh saameyn iska soo horjeeda – waxay yihiin kuwo yareeya halista dhibaatooyinka wadnaha.
Kansarka iyo nooca 2aad ee sonkorowga waxay sameeyeen inta ka dhiman cuntada lala xidhiidhiyo dhimashada
Ilaa intee le’eg ayaa dunida ka jirta cuntooyin kaamil ah?
Ma jiro waddan fiican, mid walbana wuxuu qayb ka qaataa cuntooyin caafimaad leh oo ka badan kuwa kale, hase yeeshee intee in leeg ayuu aduunku u jiraa cuntada ugu saxsan.
Cunnada caafimaadka leh ee ka maqan cuntada badankeeda adduunka ayaa ah midhaha iyo siidhka, sida laga soo xigtay daraasadda.
Akhristayaasha u heelani waxay ogaan doonaan inay si weyn ugu soo bandhigeen cuntooyinka caafimaadka ee loo yaqaan ‘planetary health plan’, oo la soo bandhigay January, si loo badbaadiyo nolol, badbaadiyo meeraha iyo quudinta 10 bilyan oo qof.
Buurnida iyo dooda sonkorta iyo xidhiidhka ka dhexeeya casaanka hilibka la farsameeyo iyo kansarka ayaa cinwaanno waaweyn oo soo jiidasho leh dhawaanahan muujinayay.
“Kuwani waxay noqon karaan kuwo waxyeelo leh sidaynu aragnay, laakiin waxay yihiin arrimo yaryar oo ka hooseeya miraha iyo qudaarta,” ayuu yiri Prof Murray.
Cilmi-baadhayaasha ayaa sheegaya in ay tahay waqtigii loogu talagalay ololaha caafimaadka si halkia laga hadlayo nafaqooyinka sida baruurta iyo sonkorta, si loo dhiirigeliyo cuntooyinka caafimaadka leh.
Dalalkee ugu wanaagsan xagga cuntada?
Dalalka Mediterranean, gaar ahaan Faransiiska, Spain iyo Israel, ayaa leh qaar ka mid ah tirada ugu yar ee dhimashada cunnada la xidhiidha ee adduunka.
Israel ayaa leh dhimashada ugu hooseysa ee cuntada la xidhiidha- 89 qofkiiba 100,000 qof sanadkii
Uzbekistan ayaa leh dhimashada ugu badan ee la xidhiidhta cuntada – 892 qofkiiba100,000 qof sanadkii
Xuquuqda Turjumaada waxaa iska leh Berberanews
Next articleMaxkmadda Xalinta Khilaafaadka ee London oo ku xukuntay Djibouti inay bixiso $ 385 milyan oo doollar